Puntland oo gacanta ku dhigtay 30 gawaari dagaal oo Kheyre soo iibsaday? Qorshuhu maxuu ahaa? - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Puntland oo gacanta ku dhigtay 30 gawaari dagaal oo Kheyre soo iibsaday?...
Sida ay MOL u xaqiijiiyeen mas’uliyiin ka tirsan hogaanka Amniga ee Dowlad Goboleedka Puntland iyo xafiiska Madaxweyne Sacid Deni, Dowlada Puntland ayaa gacanta ku dhigtay 30 gawaari oo ah nooca dagaalka ee loo yaqaano Tiknikada iyo gawaarida ambalaasta ee dhawacyada lagu qaado kuwaas oo uu soo iibsaday Xasan Cali Kheyre.
Gawaaridaan oo lagu qabtay dekada magalaada Boosaaso ayaa waxa loo waday degaanka Galmudug iyo deeganada ku hareeraysan. Gawaaridaan oo dusha laga saaari lahaa qoryaha lidka diyaaradaha iyo qoryaha sida cukus u dhaca ayaa waxaa dibada ka soo iibsaday Xasan Cali Kheyre. Gawaaridaan waxaa qandaraas lagu siiyay oo soo iibiyay Ganacsato ka soo jeedo beesh Murusade, gaar ahaan Ganansade Cabdi Cali, Cabdikarim Gaanbe iyo Ismaaciil Gooni.
Gawaaridaan ayaa waxa hadda gacanta ku haya Dowlad Gobaleedka Puntland iyada oo ku wargalisay dhamaan hay’adaha caalamka oo ay quseeyso arintaan. Dad badan ayaa rumeysan in hubkaan marka la geeyo degaanka Galmudug, gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb lagu rakibo hubka noocyadiisa kala duwan ka dibna dib loogu soo weeraro Puntland si qalalaase siyaaseed looga dhaliyo Puntland.
Dhanka kale, Ganacsatada gawaaridaan soo iibisay ayaa sheegtay in qaybo ka mida gawaarisadaas ay lacagta lagu soo iibiyay ay bixisay shirkada Soma_Oil oo iyadu qandaraas lagu siiyay howlaha logistics ee qodida shidaalka ee degaanka Galmudug.
Xasan Kheyre ayaa rumeysan in uu xoog uu ku qabsado guud ahaan degaanada Galmudug si uu u xaqiijiyo in aan mustaqbalka dhib uga imaan Galmudug, maadama uu damac kaga jiro ceelashada shidaalka ee ku yaalo badaha ku heereersan deegaanka Galmudug.
Si kastaa oo ay ahaataba Gawaarida iyo hubka sida ba’an lagu soo galinayo deeganada Galmudug, waxa uu salka ku hayaa qorshaha Farmaajo iyo Kheyre oo ay doonayaan in xoog ku qabsadaan deeganada dalka, qaarna loo isticmaalo in qalaalase siyaasadeed iyo mid amni lagu abuuro sida Puntland.
Dowlada Puntland ayaa waxa lagula taliyay in ayan marnaba sii deynin gawaaridaas dagaal oo ay la sugo dowlada cusub ee xilka dalka la wareegi doonto horaanta sanadka danbe. Puntland ayaa looga digay dhibatada amni daro ee kaga imaan doonto sii daynta gawaarida dagaal iyo aqabka la socdo.
Previous articleSomalia: Puntland confiscated 30 armored vehicles purchased PM Khaire & SOMA-OIL?
Next article(Deg Deg) RW Ingiriiska oo cisbitaal la dhigay coronavirus aawgiis